के गर्दैछिन् त केकी अधिकारी ? (६ तस्बिर) « Ramailo छ
के गर्दैछिन् त केकी अधिकारी ? (६ तस्बिर)
प्रकाशित मिति : Mar 9, 2022
केकी अधिकारी व्यस्त भैराख्ने नायिकामा पर्न आउँछिन् । कोरोनाले फिल्म क्षेत्र ठप्प हुँदा पनि केकी भने व्यस्त बनिन् । केही समय अगाडी केकी म्युजिक भिडियोमा निकै छाइन् । अहिले चाहिं उनको व्यस्तता के के मा छ त ?
‘कामहरु त धेरै भैराछ’, केकीले सुनाइन्, ‘बोक्सीको घरको पोस्ट प्रोडक्सनदेखि कमेडी क्लब विथ च्याम्पियनको प्रि-प्रोडक्सन चल्दैछ।’ यो सँगै केकी म्युजिक भिडियो पनि मिलाएर खेलिरहेकी छिन् । ‘अहिले म्युजिक भिडियो चाहिं मन पर्ने कन्टेन्टहरुमा काम गर्दैछु ।’ केकी केही विज्ञापनहरुमा पनि आवद्ध भएकी छिन् । उनी अभिनित ‘बोक्सीको घर’, ‘परदेशी २’ र ‘झिंगे दाऊ’ प्रदर्शनको क्रममा छन् ।
तस्बिर : कुशल घतानी “राई“